ရင်ခုန်စရာ အတွင်းသားအလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ သွန်းဆက်ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
Homepage / Cele News / ရင်ခုန်စရာ အတွင်းသားအလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ သွန်းဆက်ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး
ရင်ခုန်စရာ အတွင်းသားအလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ သွန်းဆက်ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး
မင်း သမီး ချောလေး သွန်းဆက် က ဖြူဖွေး နုဖက် နေတဲ့ အသား အရေ လေး တွေ အပြင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် အချိုးစား ပြေပြစ်နေတာ ကြောင့် ယောကျ်ား ပရိ သတ် တွေ ရဲ့ အသည်းကို လှုပ်ခါနိုင်ခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေ အပြင် ကြော်ငြာတွေများစွာ ရိုက်ကူးထားပြီး အနုပညာနယ်ပယ်မှာ အ ကောင်း ဆုံး လျှောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ သူပဲဖြ စ်ပါ တယ်။ လက်ရှိ မှာတော့ သွန်းဆက် ဟာ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ကပ်ရောဂါကြောင့် ခဏတာ ရပ်နားထားပြီး အနား ယူ နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ အ ပြင် အနုပညာ အလုပ်တွေကို ရပ်နားထားခဲ့ပေမယ့် အလန်းစားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အပျင်း အပြေ ဆော့ကစားထား တဲ့ tik tok လေးတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးပါတယ် ။ သူမ ရဲ့ Tik Tok လေးတွေ ကလည်း တမူ ထူးခြား နေတာကြောင့် ကြည့်ရှု့ သူများပြား နေတာကို တွေ့ရပါ တယ် ။ ယခုမှာ လည်း သွန်းဆက် က မြင်သူ တိုင်း ငေး မော သွားရလောက် မယ့် အမိုက် စား Tik Tok လေး ကို သူမရဲ့ My day လေး မှာ တင် ပေးလာ ခဲ့ပါ တယ် ။
ဒီဗီဒီ ယို လေးထဲ မှာတော့ သွန်းဆက် ဟာ အသညျးယားစရာ အမူအရာလေး နဲ့ ညှို့အားပြင်းပြင်း ဖမ်းစားထားတဲ့ Tik Tok လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဖြူဖွေးနု ဖတ် နေ တဲ့အသား အရေေ လေးတွေ ပေါ်လွင်နေတာ ကတော့ ရင်ခုန်ဖို့ ကောင်းလောက်ပါတယ် ။ ကဲ….ခ ယခုမှာတော့ စွဲမက်စရာကောင်းအောင် အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ ဆော့ကစား ထား တဲ့ သွန်းဆက် ရဲ့ Tik Tok လေးကို ပြန်လည်ဖေါ်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ် … .
မင္း သမီး ေခ်ာေလး သြန္းဆက္ က ျဖဴေဖြး ႏုဖက္ ေနတဲ့ အသား အေရ ေလး ေတြ အျပင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ ခႏၶာ ကိုယ္ အခ်ိဳးစား ေျပျပစ္ေနတာ ေၾကာင့္ ေယာက်္ား ပရိ သတ္ ေတြ ရဲ့ အသည္းကို လႈပ္ခါနိုင္ခဲ့တဲ့ သူပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ဗီဒီယို ဇာတ္ကားေတြ အျပင္ ေၾကာ္ျငာေတြမ်ားစြာ ရိုက္ကူးထားၿပီး အႏုပညာနယ္ပယ္မွာ အ ေကာင္း ဆုံး ေလၽွာက္လွမ္းလာခဲ့တဲ့ သူပဲၿဖ စ္ပါ တယ္။ လက္ရွိ မွာေတာ့ သြန္းဆက္ ဟာ အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ခဏတာ ရပ္နားထားၿပီး အနား ယူ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ အ ျပင္ အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ရပ္နားထားခဲ့ေပမယ့္ အလန္းစားပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔ အပ်င္း အေၿပ ေဆာ့ကစားထား တဲ့ tik tok ေလးေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးပါတယ္ ။ သူမ ရဲ့ Tik Tok ေလးေတြ ကလည္း တမူ ထူးျခား ေနတာေၾကာင့္ ၾကည့္ရႈ႔ သူမ်ားျပား ေနတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္ ။ ယခုမွာ လည္း သြန္းဆက္ က ျမင္သူ တိုင္း ေငး ေမာ သြားရေလာက္ မယ့္ အမိုက္ စား Tik Tok ေလး ကို သူမရဲ့ My day ေလး မွာ တင္ ေပးလာ ခဲ့ပါ တယ္ ။
ဒီဗီဒီ ယို ေလးထဲ မွာေတာ့ သြန္းဆက္ ဟာ အသည်းယားစရာ အမူအရာေလး နဲ႔ ညႇို႔အားျပင္းျပင္း ဖမ္းစားထားတဲ့ Tik Tok ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ ျဖဴေဖြးႏု ဖတ္ ေန တဲ့အသား အေရေ ေလးေတြ ေပၚလြင္ေနတာ ကေတာ့ ရင္ခုန္ဖို႔ ေကာင္းေလာက္ပါတယ္ ။ ကဲ….ခ ယခုမွာေတာ့ စြဲမက္စရာေကာင္းေအာင္ အမိုက္စား ပုံစံေလး နဲ႔ ေဆာ့ကစား ထား တဲ့ သြန္းဆက္ ရဲ့ Tik Tok ေလးကို ျပန္လည္ေဖၚၿပ ေပးလိုက္ပါတယ္ … .
Previous post စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ ကြည့်မိသူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ ထိန်းမရအောင် ဗြောင်းဆန်သွားစေမယ့် အလန်းစားပုံများ
Next post အတွင်းသား အလှလေးတွေ အထင်းသား ပေါ်လွင်နေပြီး ညှို့အားပြင်း လွန်းနေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ ရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပုံလေးတွေ